China ovundlile Desulfurization ifektri kanye nabaphakeli | Imishini yeDelin
I-Hebei Delin Imishini ingenye yezinkampani ezinkulu zepompo ezikhethekile ekukhiqizeni amaphampu e-slurry eChina, enendawo yomhlaba engaphezu kuka-40,000m2nendawo yokwakha engaphezu kwama-22,000m2. Imikhiqizo isetshenziselwa ukuchezukisa inkambo emfuleni, izimayini, ukusansimbi, ukuhlela idolobha, amandla, amalahle, i-FGD, i-petroleum, imboni yamakhemikhali, ukukhiqizwa kwezinto ezibonakalayo, njll. ukuncela, isiteji esisodwa futhi ngesakhiwo esivundlile, okubandakanya izinzuzo zesilinganiso sokugeleza okubanzi, ukusebenza kahle okuphezulu nokonga amandla. Uchungechunge lwempompo lwe-FGD lwenziwe ngokudizayina nokonga isikhala. Njengomkhiqizi kanye nomphakeli ochwepheshe e-slurry e-China, sithuthukise izinto ezahlukahlukene zamaphampu we-DG (R) ochungechunge lwe-FGD.